Satria mihamaro ny bilaogy sy tranokala navoaka isan'andro, ny olana iray mahazatra dia ny fangalarana sary izay novidinao na noforoninao ho an'ny fampiasanao manokana na ho an'ny matihanina. TinEye, motera fitadiavana sary miverimberina, manome ny mpampiasa fahafaha-mikaroka url manokana momba ny sary, izay ahitanao hoe impiry no hita ireo sary tamin'ny tranonkala sy ny toerana nampiasana azy ireo.
Raha nividy sary stock ianao avy amin'ny loharano toa ny mpanohana anay Depositphotos, na iStockphoto or Getty Images, ireo sary ireo dia mety hiseho miaraka amin'ny valiny sasany. Na izany aza, raha naka sary ianao na namorona sary navoaka an-tserasera, dia tompon'ity sary ity ianao.
Raha tsy manome fahazoan-dàlana mazava ho an'ny mpampiasa hampiasa ny sarinao ianao na tsy hanome azy ireo ny sarinao raha nametraka izany tamin'ny toerana toy ny Creative Commons, avy eo zonao ny handray fepetra ara-dalàna amin'ireo olona ireo.
Ny sasany amin'ireo mampiavaka ny TinEye ahitana:
Manondro sary isan'andro ny valin'ny fikarohana, manodidina ny 2 miliara hatreto
Manome a API ara-barotra Azonao atao ny mampifangaro azy amin'ny faran'ny tranonkala
Offers Plugins ho an'ny mpitety marobe ahafahana mitady
Amin'ny ankapobeny, TinEye manamora ny fiarovana ny sariny sy ny fananana elektronika ny olona tsirairay. Hamarino tsara fa hanondro sary izay anananao na noforoninao ary tatero ireo nangalarina.
Tags: fikarohana sarymotera fikarohana saryfikarohana sarytineye
Fikarohana tsara kokoa, valiny tsara kokoa: ResearchTech Platform Methodify
Ny 8 Toetra mampiavaka ny marika "V" ery Tsara
May 19, 2011 ao amin'ny 1: 02 PM
Ireo tompona orinasa kely sy mpamorona tranonkala amateur matetika dia manao fahadisoana amin'ny fiheverana fa maimaim-poana ny sary iray noho izy ireo nahita izany tamin'ny tranonkala. Tsy izany ary ny programa toa an'i TinEye izay manampy ireo mpaka sary hiaro azy ireo amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna ny sarin'izy ireo, dia mety handratra tompon'orinasa kely tsy miahiahy ihany koa amin'ny tsy fahafantaran'izy ireo mampiasa “sary tantana zon'olombelona” mandra-tara loatra.
Ny vahaolana, mifikitra amin'ny sary tany am-boalohany, na loharano toa ny iStock sy Photos.com